နှင်းကျခါစဆိုလျှင် ပတ်ဝန်းကျင် တခွင်လုံး အလွန်လှပ သာယာပါသည်။ ဤတိုင်းပြည်ရောက်စ တုန်းက နှင်းကျတာ မမြင်ဘူး သဖြင့် လုပ်လက်စ အလုပ်တွေရပ်ပြီး အပြင်ထွက်ကာ ဖြည်းဖြည်းညင်သာ ကျလာသော နှင်းပွင့်ကလေးများကို တအံ့တသြ လက်နှင့် တို.ထိကြည့်ပါသည်။ သစ်ကိုင်းတွေ ပေါ်မှာ တင်နေသည့် နှင်းများကို လက်နှင့် သပ်ချကြည့်သည်။ နှင်းပွင့်တွေကို အဆုပ်လုပ်၍ စားကြည့်သည်။ စန္ဒယား ချစ်ဆွေ ရေးပြီး တင်တင်မြ ဆိုသော ဆောင်း သီချင်းထဲက အာကာပြင်မလေ နှင်းပွင့် နှင်းစက် နှင်းမှုန်လေးတွေ၊ ဘော်ငွေပန်းများပမာ ဖြူဖွေးလှစွာနေ ဆိုသော စကားကို သတိရမိပြန်သည်။ အ၀တ်ထူထူ ဖိနပ်ထူထူ ၀တ်၍ အပြင်ထွက်ခါ နှင်းတောထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြသည်။ ကလေးတွေမှာ နှင်းကျလျှင် အလွန်ပျော်ကြသည်။ နှင်းထဲမှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် နှင်းလုံးတွေ ဆုပ်၍ ပစ်ပေါက် ကစားကြသည်။ နှင်းတွေကို ကျုံး၍ လူရုပ်လုပ်ခါ ကြက်ဥ ကို နှာခေါင်းလုပ်၊ မာဖလာ ပတ်ပေးပြီး ( snowman) လုပ်တမ်း ကစားကြသည်။လမ်းတွေပိတ်၍ ကျောင်းတွေလည်း ပိတ်ပေးရသည်။
အကယ်၍သာ ကျွန်တော် အလုပ်သွားစရာ မရှိပါမူ မိမိအိပ်ခန်း အတွင်းမှာ နွေးထွေးစွာ ထိုင်ပြီး ကော်ဖီပူပူလေး သောက်ခါ အင်မတန် လှပသော သဘာဝရှူခင်းကို ထိုင်ကြည့်နေလိုက်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သို.သော် အလုပ်မသွားဘဲ နေလို. မဖြစ်သဖြင့် လုံခြုံထွေးနွေးသော အ၀တ် လည်ပတ် ဘွတ်ဖိနပ် ဦးထုပ်များ ၀တ်ဆင်ကာ ၁၂ မိုင်ခန်. ဝေးသော (Tredegar) ဆေးရုံသို. နှင်းတွေ တဝေေ၀ထဲ မှာ ခရီးနှင်ရပါသည်။ ကားမထွက်ခင် ကားပေါ်မှာ တင်နေသော နှင်းများ ရေခဲများကို ခြစ်ချ၊ ကားမှန်များ ကြည်လင်အောင် လုပ်ပြီးမှ ဖြေးဖြေး ထွက်ရပါသည်။ ကားပေါ်မှ ရေခဲများကို ရေနှင့်လောင်း၍ ပျော်အောင်လုပ်၍ ရသော်လည်း လောင်းချသောရေ မြေကြီးပေါ်မရောာက်ခင် ချက်ချင်းခဲသွား တတ်သဖြင့် ရေနှင့် မဖျော်ဘဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လက်နှင့် ( နှင်းခြစ်သော ပလပ်စတစ်ဂေါ်ပြားလေး နှင့်) ကားမှန် ကိုခြစ်ချရပါသည်။မှန်ပေါ်မှ ခြစ်ချလိုက်သော ရေခဲမှုန်များကို လုံးလိုက်ပါက ဗမာပြည်က ရေခဲ ပလုတ်တုတ်သည် လုပ်ထားသော အချိုရည် မဆမ်းမှီ ရေခဲ အဆုပ်ကလေးနှင့် တူသွားပါသည်။
ကားထားရာ အိမ်ရှေ. လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမှာ ရေခဲပြင် အတိဖြစ်နေ၍ ချော်မလဲအောင် အတော် သတိထားရသည်။ သည်ရာသီမျိုးမှာ ရေခဲပေါ်ချော်လဲပြီး ပေါင်ကျိုး လက်ကျိုးသူတွေ ဆေးရုံမှာ ပိုတွေ.ရတတ်သည်။ လမ်းမများတွင် ရေမခဲစေရန်အတွက် မြို.ကောင်စီက ဆားရောထားသောသဲ (salt grit) ကို စက်ကြီးများဖြင့် ဖြန်းပေးပါသည်။
နှင်းစကျပြီ ဆိုလျှင် ဈေးဆိုင် (supermarket) တွေမှာ လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး၍ တိုးမပေါက်တော့ပါ။ ပေါင်မုန်.၊ နွားနို့ အသားငါး အစရှိသော အရေးတကြီး လိုအပ်ရာရာတွေကို အလုအယက်ဝယ်တတ်ကြသည်။ နောက်ရက်တွေ အပြင်မထွက်နိင်လျှင် စားစရာ မပြတ်ရအောင် သိုလှောင်ထားတတ်သည့် သူတို.ဓလေ့ ကိုရထားပြီးဖြစ်သော ကျွန်တော်သည်လည်း ဆူပါမားကက်တွင် စားစရာ ၀င်ဝယ်ပါသည်။ ဓါတ်ဆီလည်း တိုင်ကီအပြည့် ဖြည့်ထားရပါသည်။ ကားထဲတွင် အရေးပေါ်ပစ္စည်းများ အဖြစ် သောက်ရေ၊ စားစရာ ၊ဓါတ်မီး ၊နှင်းစီး ဘွတ်ဖိနပ် ၊အ၀တ်အပို၊ စောင် ၊နှင်းကော်စရာ ဂေါ်ပြား ၊ရေခဲ ဖျော်စရာ (de-icer) ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ သွားပွတ်တံ စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံအောင် ထည့်ထားပါသည်။ အဆင်မသင့်လျှင် တစ်မိုင် နှစ်မိုင် ခရီးလောက်မှာပင် နာရီပေါင်းများစွာ ကားထဲ၌ ပိတ်မိနေနိင်ပါသည်။ မိမိအရပ်မဟုတ်ပါက အောက်သို့လည်း ဆင်း၍မဖြစ်သောကြောင့် ကားထဲမှာဘဲ အပူငွေ.ဖွင့်ပြီး နေကြရပါသည်။ (ဤအခါမျိုးတွင် ဆီးသွားချင်သော ဒုက္ခနှင့်တွေ.ပါက ကားထဲတွင်ပင် ကိစ္စပြီးစီးနိင်အောင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်၊ ပလပ်စတစ်ပုံး စသည်များလည်း ဆောင်ထားသင့်ပါသေးသည်)။ တစ်နှစ်တုန်းက နှင်းတွေကျပြီး လမ်းများလုံးဝ ပိတ်သွားသောကြောင့် အိမ်မပြန်နိင်ဘဲ ဆေးရုံမှာ တစ်ည အိပ်ခဲ့ရဘူးပါသည်။
ကျွန်တော် အလုပ်သွားရာ လမ်း( အေ-၄၆၅) မှာ တောင်ပေါ်လမ်းဖြစ်ပြီး လမ်းဘေးမှာ ကျောက်တောင်တွေ ရေတံခွန်တွေ တောအုပ်တွေ နှင့် နွေဦးကာလမှာ ဆိုလျှင် အင်မတန်သာယာပါသည်။ ယခုတော့ ရေတံခွန်က ကျတဲ့ရေတွေ ခဲသွားပြီး ရေခဲကျောက်စက်တွေ အချောင်းအချောင်း တွဲလွဲခိုနေသည်ကို မြင်ရပါသည်။ အရွက်မရှိတော့သော သစ်ပင်သစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာ နှင်းတွေတင်နေသည်မှာ ၀ါဂွမ်းဖတ်လေးတွေ တင်ထားသည်နှင်း တူလှပါသည်။ ရေကန်ကလေးတွေ ချောင်းကလေးတွေလည်း အပေါ်ယံမှာ ခဲနေပါပြီ။ ရေပြင်မှာ သမန်တလင်း လိုဖြစ်သွားပြီး ကြွေကျလာသော သစ်ကိုင်းခြောက်ကလေးများမှာ အောက်သို. မြုပ်မသွားဘဲ ရေခဲပြင်တွင် တင်နေပါသည်။ အိမ်တံစက်မြတ်မှ တစက်စက် ကျလာသော ရေများလည်း ကျနေရင်းမှာပင် တဖြည်းဖြည်း ခဲသွားပြီး ၁ပေ ၂ပေ ခန်. ရှည်သည့် ရေခဲအချောင်းများ ဖြစ်သွားကြပါသည်။ လမ်းဘေး ကွင်းပြင်တွေ အဆောက်အဦး တွေ အပေါ်မှာလည်း နှင်းတွေဖုံးနေပြီး လောကဓါတ်ကြီး တစ်ခုလုံး ဖြူဖွေးတောက်ပနေပါသည်။ အေးလိုက်သည်မှာလည်း အလွန်ပါဘဲ။ (ဗမာပြည်က ရေခဲသေတ္တာတွေ ဆိုလျှင်တော့ မီးအားမပြည့်လို့ ယခုလောက် အေးနိင်မည် မထင်ပါ)။
လမ်းပေါ်တွင် တစ်ချို.ကားများမှာ ရှေ.မှန်နောက်မှန် တို.ကိုသာ ခြစ်ချပြီး ခေါင်မိုးပေါ်က နှင်းတွေကို မခြစ်နိင်ဘဲ မောင်းလာပါသည်။ လေးဘက်လေးတန်က ဓါးနှင့် ဖြတ်ထားသလို ရှိသော လေးထောင့် နှင်းလွှာထူထူကို ကားအမိုးပေါ်မှာ မြင်ရသည်မှာ ၊ထွာဆိုင် မျှလောက်ထူသော နှင်းမွေ.ရာကြီးကို ကားအမိုးပေါ် တင်လာသည်နှင့် တူလှပါသည်။